दशैंको विदामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका २२ शाखा खुल्ला रहने
दशैंको विदामा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २२ वटा शाखाहरु खुल्ला रहने भएका छन् । बैंकको २०७६ सालको नेपालीहरूको महान् चाड वडा दशैंको अवसरमा विदा हुने दिनहरू २०७६ आश्विन १८, १९, २० र २२ गते २२ वटा शाखा कार्यालयहरू बिहान १० बजेदेखि १ बजे सम्म खुल्ला रहने छन् । काठमाडौै उपत्यका भित्रका शाखा कार्यालयहरू बानेश्वर, भोटाहिटी, महाराजगन्ज, कलंकी, ललितपुर, र त्रि. अ.विमानस्थल खुल्ला रहने छन् ।
त्यसैगरी काठमाडौँं उपत्यका बाहिरका शाखा कार्यालयहरू विर्तामोड, दमक, इटहरी, बिराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा, महेन्द्रपुल, तुलसीपुर, कोहलपुर, सुर्खेत, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर खुल्ला रहने छन् । शाखा कार्यालय बानेश्वर र महेन्द्रपुल विजया दशमीको दिन (आश्विन २१ गते) पनि खुल्ला रहने छन् । उक्त विदाका दिन खुल्ला रहने शाखाहरूबाट नगद जम्मा तथा चेकको भुक्तानी गरी ग्रहाकहरूलाई सेवा प्रदान गरिने छ ।
बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २०७५/०७६ मा पाँच अर्ब ३२ करोड रूपैंया खुद मुनाफा गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको निक्षेप एक खर्ब ९० अर्ब रूपैंया, कर्जा एक खर्ब ४४ अर्ब रूपैंया रहेको छ ।बेस रेट छ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको हाल सातै प्रदेस, ७७ जिल्लामा दुई सय ३८ वटा शाखा कार्यालय, दुई सय चार वटा एटिएम र ९३ वटा शाखा रहित बैंकिङ रहेको छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय टोखा शाखाको आयोजनामा नेपालीहरुको महान चाडपर्व विजया दशमी, शुभ दिपावली, नेपाल सम्वत् एवं छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम शाखा कार्यालय टोखा परिसरमा सोमबार सम्पन्न भएको छ । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ, ब्रान्च अपरेशन विभागका प्रमुख सरोज बस्नेत, टोेखा न.पा. वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष नरोत्तम राना, वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष उत्तम अधिकारी, हास्य कलालकार सन्तोष पन्त लगायतले शुभकामना मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए । बैंकका ३ नम्बर प्रादेशिक कार्यलयकी प्रमुख सोनी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रमको संचालन शाखा कार्यालय टोखाका सहायक प्रबन्धक सुजाता थापाले गरेका थिए ।